Serivisy fitsaboana ambony indrindra any Shina - Casting Minghe
Inona ny fizotran'ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fomba fitsaboana sy ny fomba fiasan'izy io - Serivisy famaranana
Rehefa mifandray amin'ny ôksizenina eny amin'ny rivotra ny vy dia ho simba ny tampon'ny vy. Ity famaohana ity dia mampihena ny fananana ara-batana sy ara-mekanika an'ilay fitaovana. Ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny tarehy dia dingan'ny fisorohana ny vy tsy hifandray amin'ny oksizena amin'ny alàlan'ny famolavolana fitaovana mifantoka, toy ny sarimihetsika polymer, horonan-tsarimihetsika oksida, ary horonan-tsary metaly, eo ambonin'ny metaly.
Raha vita amin'ny fizotran'ny vokatra ny fizotran'ny fitsaboana, azo sorohina ny harafesin'ny vokatra, ary azo hatsaraina ny infarction myocardial mekanika sy ny toetra ara-batana amin'ny vokatra.
Minghe dia manome ISO 9001: serivisy fitsaboana metaly voamarina 2015 Ny fitaovana ampiasaina dia misy alimo, varahina, vy, vy tsy misy fangarony, varahina, maneziôma, vovoka vy, volafotsy, titanium & firaka fanariana hafa. Die Casting Parts amin'ny halavany hatramin'ny 40 ft. Dia mety ho vita.
Tombontsoa amin'ny fizotran'ny fitsaboana amin'ny metaly
Ny asan'ny fitsaboana amin'ny metaly dia azo fintina toy izao:
- Hatsarao ny bika aman'endriny
- Manampy loko tsara tarehy manokana
- Ovao ny famirapiratana
- Hatsarao ny fanoherana simika
- Ampitomboy ny fanoherana ny akanjo
- Ferana ny vokatry ny harafesina
- Ahena ny fifandirana
- Esory ny lesoka ambonimbony
- Fanadiovana ireo singa
- Ataovy toy ny palitao primer
- Amboary ny refy
Safidio ny fizotran'ny fitsaboana tsara indrindra
Fepetra hafa na volavola fanao manokana, tongasoa anay hifandray aminay ho an'ny teny nalaina maimaimpoana!